Umshini wokuphakelwa kwezinhlanzi wokudla okuntanta
Amandla:37kw + 1.5kw + 0.4kw isigaba sesithathu
Ikhono:400~ 500kg / h
Usayizi wokugcina we-pellet:0.9~ 15mm
Isetshenziselwa:ukwenza ukudla kwezinhlanzi ,ukudla kwekati ,ukudla kwenja ,Ukudla kwezilwane zasekhaya
Ijamo lokugcina le-pellet :ijamo lebhola,ijamo lamathambo,ukwakheka kwenhliziyo,ukwakheka kwezinyawo
Ama-Raw material:okusanhlamvu ,ubhontshisi,ufulawa wombila,inyama,amathambo ukudla ,izinhlanzi zisho, uwoyela wezinhlanzi,njll
Kudingeka umswakama omswakama:15~ 25%
Kuhlala kuqukethe amaprotheni acebile aluhlaza ekudleni kwezinhlanzi , kepha amaprotheni ongahluziwe ekudleni kwezinhlanzi kunzima ukuwagaya inhlanzi. Ukugwema ukuhlukaniswa kwezithako zokuphakelayo ngesikhathi senqubo yokuxuba, abantu basebenzisa umshini wokudla we-pellet wezinhlanzi ukwenza ama-pellet wezinhlanzi zokudla ,ezingakhulisa i-gelatinization ne-digestibility yokudla,ukuze izinhlanzi kube lula ukuthola izondlamzimba ezixutshwe ngokuphelele ekudleni kwezinhlanzi.I-fish feed pelleting isho inqubo yokucindezela, ukukhipha nokubumba izithako zokuphakela zingene ngendlela ehlukile yama-pellets ngaphansi kwesenzo sokushisa, umswakama kanye nengcindezi.Ukudla okugcwele okukhiqizwa ngumshini we-pellet wezinhlanzi ezintantayo sekuye kwaba yindlela ephambili yokudla kwezinhlanzi eziningi ngenxa yokudla okuningana kwazo,isisu esiphakeme nesikhathi eside sokuntanta,kulula ukuyidlulisa nokuyigcina .
Umshini wepellet wezinhlanzi ezintantayo usetshenziselwa kabanzi ukukhiqiza ama-pellets aphakeme asemanzini wasendlini yezinhlobo eziningi zezilwane zasemanzini ezinjengezinhlanzi, inhlanzi eyikati, tilapia,ama-shrimps, crab nokunye,lungasetshenziselwa ikati, inja nenyoni njll. Izinto zokusetshenziswa zingaba ukolweni, ukolweni ,irayisi,ikhekhe lesoya ,ukudla kwamathambo ,isidlo sezinhlanzi ,uwoyela wezinhlanzi njll., Ama-pellets akhukhumezayo angakwazi ukuntanta phezu kwamanzi ngaphandle kokuchithwa ngaphezulu 20 amahora. Lo mshini wokuphaka izinhlanzi ulungele ukukhiqizwa kwama-pellets kusuka okusanhlamvu, amaprotheni kanye nama-molasses ngezinhloso zokuthengisa. Kukhiqizwa ama-pellet akhiqizwayo enhlanzi ngezinwele ezinhle, ube nokunambitheka okungafani nenye,acebile izakhi zomzimba ,ngosayizi ohlukile nesimo.
Umshini wezinhlanzi we-diesel engine feed pellet uqhutshwa yinjini yedizili futhi usebenza ngalesi sisekelo.Ixazulula inkinga yokuthi ugesi awunankinga, lapho amandla wesigaba esithathu engasetshenziswa, kodwa amandla okusika asadinga i-drive kagesi.Ukuqanjwa kwesakhiwo salo mshini kusayensi futhi kunengqondo, nendawo encane yaphansi kanye nokuphuma okuningi,umsindo ophansi osebenzayo, nokusetshenziswa kwamandla amancane. Izinga le-pellet liphezulu futhi ingaphezulu komhlaba likhanya futhi lihlanzekile, okulungele ukugcinwa nokuhamba. Le nto yokusebenza isebenza kalula nokunakekelwa .Isayizi yokubumba ingaba ngu-0.9-15mm, okungakhiqiza i-pellet ephezulu yokuphaka esezingeni eliphakeme ,okushelelayo, umfaniswano nokucwebezelayo.
Izici zomshini wokuphakelwa kwezinhlanzi
1.Kunezinhlobo eziningi ezahlukahlukene zemodi ongazikhetha ngokuya ngosayizi we-pellet usayizi we-pellet angaba ngu-0.9 ~ 15mm.Small size fish feed pellet kungasheshisisa ukugaya nokufaka, ubuhle be-pulverization of feed yasemanzini kufanele bube buncane kunokudla kwenkukhu.
2.Khiqizwa ama-pellet feed nge-compact isakhiwo,ukuhlangana okuphezulu nokuphikiswa kwamanzi. I-pellet enwetshiwe ingakwazi ukuntanta emanzini ngaphezu kwe 20 amahora.
3.Isakhiwo esilula, isetshenziswa kabanzi, indawo encane yokubeka phansi floor.Umsebenzisi angasebenzisa izinto eziyimpuphu ezomile ukwenza amapeletha ezinhlanzi ngaphandle kokufaka amanzi angeziwe emshinini wokupholisa izinhlanzi oyintantayo. I-pellet feed eyomile ilungele ukukugcina.
4.Lo mshini wokuphaka izinhlanzi uyasebenza futhi ukwenza i-pellet feed yenja ,ikati,isilwane ,inyoni njll .Kungakhiqiza okuphakelayo kwezilwane okunamaprotheni amaningi, futhi kulula ukugaya. Ukushisa okuphezulu nokucindezela okuphezulu kungabulala i-salmonellosis kanye nokutheleleka kwamagciwane.
Isimiso esisebenzayo somshini wokudla we-tilapia
Umsebenzisi ufaka izinto ezingavuthiwe ku-feed hopper,shaft okuphakelayo kuzokondla izinto zokwengeza izingxenye.Faka isenzo samandla wokuxaka kwesikulufu esengeziwe, Izinga lokushisa eliphakeme phakathi kwesikulufa neplates yokushisa ukukhipha isitashi sezinto zokwakha, bese amaprotheni ehlanganiswa. Ngemuva kwalokho okuphakelayo kwezinhlanzi kukhishwa kusuka kwizimbobo zokubumba. Ama-pellets ezinhlanzi ezinhlanzi adonswa ngaphandle komshini wokuphaka izinhlanzi. Umsebenzisi angalungisa i-angle yokugawula ummese ukushintsha ubude be-feed pellet.
Amapharamitha wezobuchwepheshe womshini we-tilapia feed
(kg / h) Amandla amakhulu
30-50 4 0.4 0.4 Usuku 40
I-VTGP60 120-150 15 0.4 0.4
Ividiyo esebenzayo yomshini wepellet wezinhlanzi ezintantayo